Home Wararka Beelo degan Guriceel oo sheegay inay lacag ku bixiyeen siidenyta dad afduub...
Beelo degan Guriceel oo sheegay inay lacag ku bixiyeen siidenyta dad afduub loga heysaty
Wararka ka imanaaya deganada hoos yimaada degmada Guriceel ayaa sheegaya in Odayaasha dhaqanka degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ay dadkii Afduub ahaanta loogu heystay gobolka Hiiraan in sii deyntooda ay ku bixiyeen Lacag madax furasha ah. Maleeshiyaaadka hubeysan ayay sheegeen in ay siiyeen Lacag dhan 40,000 oo dollar oo ah Lacag madax furasho ah,islamarkanaa,ay sidaas ku sii dayeen,intii ay xirnayeena ay la macaamilayeen Maleeshiyaadka Afduubka geystay.
Dhanka kale maanta ayaa la sii daayay 5-qof oo maalma ka hor laga Af-duubtay deegaano ku dhow degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan,islamarkaana ay u xirnaaayeen Maleeshiyaad hubeysan. Wadada isku xirta degmooyinka Guriceel iyo Matabaan ayaa noqotay meel amnigeedu uu sii xumaanayay maalmihii la soo dhaafay kadib markii ay soo bateen dhaca iyo rasaasta lala beegsanayo dadka Safarka ah.
Waxaa kaloo la sheegayaa in cidiamada dowladda fedraalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa howlgallo xiriir ah waxa ay ka sameynayeen degmada Matabaan xilli aysan baajin falalka Afduubka iyo dhaca dadka Safarka ku jira.